प्रदेशसभा सदस्य थापालाई धम्क्याउने मुख्य योजनाकारसहित चार पक्राउ
ओम हमाल कास्की । निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ (ख) का सांसद विन्दुकुमार थापालाई ज्यानमार्ने धम्की दिने मुख्य योजनाकारसहित चारजनालाई कास्की प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको हिरासतमा
अवैध सिमेन्ट छुटाउन गएका वडाध्यक्ष घाइते
रौतहट । रौतहट जिल्लाको बंकुलबजारको नजिक भारतबाट अवैध रुपमा ल्याइरहेको सिमेन्ट प्रहरी चौकी, बंकुलले जफत गर्दा बुधबार स्थानीयवासी र प्रहरीबीच तनाव सिर्जना भयो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटबाट थप टोली
के सन्देश बोकेर आउलिन् सुष्मा स्वराज ?
काठमाडौं । भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज आज अपराह्न काठमाडौं आउँदै छिन् । वायुसेनाको विशेष विमानमा दुई दिनका लागि नेपाल आउन लागेकी उनीसँग नवनियुक्त विदेशसचिव विजय केशव गोखले र सहसचिवद्वय सुधाकर
लागुऔषध ओसारपसारमा गर्भवती तथा सुत्केरीको प्रयोग
पर्सा । नेपालबाट भारततर्फ हुने लागुऔषध ओसार पसारमा कारोबारीहरुले गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको प्रयोग गर्ने गरेको खुलासा भएको छ । वीरगन्जको रजतजयन्ती चोकबाट साढे दश किलो चरेससहित आठमहिने शिशुकी आमालाई
ट्रक पल्टिँदा २० गोरु मरे
राजविराज । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत सप्तरीको हनुमाननगर–कंकालनी नगरपालिका–१ भारदहमा बुधबार साँझ ट्रक पल्टिँदा ट्रकमा राखे लगिँदै गरिएका २० वटा गोरु मरेको छ । सिरहाबाट मोरङको उर्लाबारीतर्फ जाँदै गरेको गोरु लोड गरिएको
बागमती सफाइअभियान भारतमा पुरस्कृत
काठमाडौं । वाग्मती सफाइ महाअभियानलाई भारतमा पुरस्कृत गरिएको छ । सफाइ अभियानले ‘देशव्यापी जागरण ल्याएको भन्दै’ अखिल विश्व गायत्री परिवारले भगीरथ पदक तथा पुरस्कार दिएको हो । गायत्री परिवारले आइतबार
पराजुली डन, हत्यारा, माफिया हुन्ः डा. केसी
काठमाडौं । प्रधानन्यायधीश गोपाल पराजुलीले तत्कालै राजिनामा दिनुपर्ने भन्दै त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्रा. डा. गोविन्द केसीले पुनः माग गरेका छन् । प्रधानन्याधीश पराजुलीलाई भ्रष्ट र हत्याराको संज्ञा दिंदै डा. केशीले
पुराना हतियार देखाउने सेनाकाे तयारी
काठमाडौं । नेपाली सेनाले पुराना हतियार सार्वजनिक गर्ने भएको छ । महाशिवरात्री तथा सेना दिवस अवसरमा माघ २५ देखि २७ गतेसम्म सैनिक मुख्यालयमा एेतिहासिक हतियार तथा तस्विर प्रदर्शनी गर्न लागेको
‘बूढीगण्डकी पीडितलाई छिट्टै मुआब्जा दिन्छौ’
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापाले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना पीडितलाई मुआब्जा छिट्टै दिइने जानकारी गराएका छन् । ‘मुआब्जा बितरण प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ’ बूढीगण्डकी सरोकार समितिले बुधबार मन्त्रालयमा आयोजना
अवैध रुपमा संचालित अस्पताल र डाक्टरलाई ठगी मुद्दा (को–को परे)
काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले अवैध रुपमा संचालित अस्पताल मालिक र चिकित्सक (१७जना) लाई ७ दिन थुनामा राखी अनुसन्धान थाल्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ । न्यायधीश राजेन्द्र नेपालको इजलाशले उनीहरुलाई